Tencent သည် ဂိမ်း စမတ်ဖုန်း ထုတ်လုပ်သူ Black Shark ကိုဝယ်ယူ ခဲ့ပြီး Metaverse အစီအစဉ် ကိုတိုးမြှင့် ခဲ့သည် – Pandaily
Tencent သည် ဂိမ်း စမတ်ဖုန်း ထုတ်လုပ်သူ Black Shark ကိုဝယ်ယူ ခဲ့ပြီး Metaverse အစီအစဉ် ကိုတိုးမြှင့် ခဲ့သည်
Jan 10, 2022, 16:24ညနေ 2022/01/10 23:51:16 Pandaily
36krTencent သည် ဂိမ်း စမတ်ဖုန်း ကုမ္ပဏီ Black Shark ကိုဝယ်ယူ ရန်စီစဉ် နေကြောင်း တနင်္လာနေ့တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ ဝယ်ယူမှု ပြီးဆုံး သွားသောအခါ Black Shark သည် Ren Yuxin ဦး ဆောင်သော Tencent Group PCG နှင့်ပူးပေါင်း လိမ့်မည်။ Tencent သည် ဝယ်ယူ မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်ချက် ပေးရန် ငြင်းဆန် ခဲ့သည်။
ငွေပေးငွေယူ ပြီးဆုံး သည်နှင့် တပြိုင်နက် ဟာ့ဒ်ဝဲ ရောင်းချ သူ သည်၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေး အသွင်ပြောင်း မှုကို ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ အစီရင်ခံစာ များအရ Black Shark ၏အနာဂတ် စီးပွားရေး အာရုံစိုက် မှုသည် ဂိမ်း စမတ်ဖုန်း များမှ VR ထုတ်ကုန် တစ်ခုလုံး သို့တိုးချဲ့ သွားမည်ဖြစ်သည်။ Tencent သည် အကြောင်းအရာ များကိုထောက်ပံ့ ပေးပြီး Black Shark သည် hardware access ကိုထောက်ပံ့ ပေးလိမ့်မည်။
Black Shark ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ စတင္တည္ေထာင္ ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး Xiaomi က ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ ေပးခဲ့ပါတယ္။ Xiaomi ၏ အစုရှယ်ယာ ပိုင် Tianjin Venture Capital Industrial Co., Ltd. သည်အဓိက ရှယ်ယာရှင် ဖြစ်ပြီး Black Shark ၏ ၄၆. ၄% ကို ပိုင်ဆိုင်သည်။ Luo Yuzhou သည် Black Shark ကိုပူးတွဲ တည်ထောင်သူ နှင့်လက်ရှိ စီအီးအို ဖြစ်ပြီး Huawei China ရှိ စားသုံးသူ စီးပွားရေး ဒု ဥက္က president ္ဌ ဖြစ်သည်။ ဒီ ဝယ်ယူ မှုကို Xiaomi အမှုဆောင်အရာရှိ တွေကလည်း အသိအမှတ်ပြု ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“ Black Shark ရဲ့ တန်ဖိုး ဟာ ယွမ် ၃ ဘီလျံ (ဒေါ်လာ ၄ ၇၀. ၇၈ သန်း) ရှိပြီး Tencent က ယွမ် ၂. ၆ ဘီလျံ မှ ၂. ၇ ဘီလျံ (ဒေါ်လာ ၄၀ ၈၀. ၁ သန်းမှ ၄ ၂၃. ၇ သန်း) အထိလျှော့ချ ခဲ့တယ်” လို့ သတင်းရင်းမြစ် တစ်ခုက ဆိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Xiaomi 5G Game Flagship Black Shark3က တကယ့် ပခုံး ခလုတ် ကို ပွဲထွက်
Facebook နှင့် Bytedance ကဲ့သို့သော အဓိက စက်မှုလုပ်ငန်း ကစားသမား များ၏ မကြာသေးမီက ပြုလုပ်ခဲ့သော အခြား လုပ်ဆောင်မှုများ ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား လျှင် Tencent သည် VR နှင့် AR နယ်ပယ် များသို့ ၀ င်ရောက် ရန် အချိန် ကိစ္စ သာဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် Facebook (ယခု Meta) သည် Oculus ကိုဒေါ်လာ ၂ ဘီလီယံ ဖြင့် ဝယ်ယူ ခဲ့ပြီး လက်ရှိတွင် ယူနစ် ၁၀ သန်းကျော် တင်ပို့ ခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင်Bytedance သည် Pico ကို ယွမ် ၉ ဘီလီယံ ဖြင့် ဝယ်ယူ ခဲ့သည်(ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄၁ ဘီလီယံ) ။
Tencent သည်ဤ အခွင့်အလမ်း ကိုအသုံးချ လို သည်မှာ ထင်ရှားသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ကုမ္ပဏီ ၏တတိယ သုံးလပတ် ဘဏ္ financial ာရေး အစီရင်ခံစာကို ထုတ်ပြန် ပြီးနောက် တည်ထောင်သူ Ma Xiaoma က Tencent သည် metaverse ကို စူးစမ်း လေ့လာရန်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရန် နည်းပညာနှင့် စွမ်းရည် များစွာ ရှိကြောင်း စွမ်းဆောင်ရည် ကွန်ဖရင့် ခေါ်ဆို မှုတွင် အလေးပေး ပြောကြားခဲ့သည်။ ယခင်က Tencent သည် “ King Metaverse” , “ Tianmei Metaverse” နှင့် “ QQ Metaverse” စသည့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ် များကို မှတ်ပုံ တင်ခဲ့သည်။
Industry Jul 10 ဇူလိုင် 10, 2021